နင်ဂျာ - ဝီကီပီးဒီးယား
ဂျပန်ပဒေသရာဇ်ခေတ်မှ လျှို့ဝှက်အေးဂျင့် သို့မဟုတ် ကြေးစား
၂.၃ အိဂါနှင့် ကိုးဂါမျိုးနွယ်စုများ
၂.၄ ရှိမဘရ ပုန်ကန်မှု
၄ နင်ဂျာတို့၏ အခန်းကဏ္ဍများ
၄.၄ စိတ်ပိုင်းဆိုင်ရာ စစ်ဆင်ရေး
၇ ဒဏ္ဍာရီဆန်သော စွမ်းရည်များ
၈ နိုင်ငံခြားသား နင်ဂျာများ
၉ မြန်မာနိုင်ငံ နှင့် နင်ဂျာများ
၁၀ နာမည်ကြီး နင်ဂျာများ
၁၁ ရေပန်းစားသော ယဉ်ကျေးမှု
မြန်မာနိုင်ငံ နှင့် နင်ဂျာများပြင်ဆင်
↑ Kawakami, pp. 21–22
↑ ၂.၀၀ ၂.၀၁ ၂.၀၂ ၂.၀၃ ၂.၀၄ ၂.၀၅ ၂.၀၆ ၂.၀၇ ၂.၀၈ ၂.၀၉ ၂.၁၀ ၂.၁၁ ၂.၁၂ ၂.၁၃ ၂.၁၄ ၂.၁၅ ၂.၁၆ ၂.၁၇ ၂.၁၈ ၂.၁၉ ၂.၂၀ ၂.၂၁ ၂.၂၂ ၂.၂၃ ၂.၂၄ ၂.၂၅ ၂.၂၆ ၂.၂၇ ၂.၂၈ ၂.၂၉ ၂.၃၀ ၂.၃၁ ၂.၃၂ ၂.၃၃ ၂.၃၄ ၂.၃၅ ၂.၃၆ ၂.၃၇ ၂.၃၈ ၂.၃၉ ၂.၄၀ ၂.၄၁ ၂.၄၂ ၂.၄၃ ၂.၄၄ ၂.၄၅ ၂.၄၆ Turnbull 2003
↑ ၃.၀ ၃.၁ Crowdy 2006
↑ Frederic 2002
↑ ၅.၀ ၅.၁ ၅.၂ ၅.၃ Green 2001
↑ ၆.၀ ၆.၁ ၆.၂ Green 2001; based on different readings, Ninpiden is also known as Shinobi Hiden, and Bansenshukai can also be Mansenshukai.
↑ Takagi, Gomi & Ōno 1962; the full poem is "Yorozu yo ni / Kokoro ha tokete / Waga seko ga / Tsumishi te mitsutsu / Shinobi kanetsumo".
↑ ၉.၀ ၉.၁ Axelrod၊ Alan (2015)။ Mercenaries: A Guide to Private Armies and Private Military Companies။ Washington, D.C.: CQ Press။ ISBN 9781483364674။
↑ Waterhouse 1996
↑ Chamberlain 2005; Volume 2, section 80
↑ ၁၂.၀ ၁၂.၁ ၁၂.၂ ၁၂.၃ ၁၂.၄ ၁၂.၅ Ratti & Westbrook 1991
↑ Friday 2007
↑ ၁၄.၀ ၁၄.၁ ၁၄.၂ ၁၄.၃ ၁၄.၄ ၁၄.၅ ၁၄.၆ Draeger & Smith 1981
↑ ၁၅.၀ ၁၅.၁ ၁၅.၂ Deal 2007
↑ ၁၆.၀ ၁၆.၁ Adams 1970
↑ ၁၇.၀ ၁၇.၁ ၁၇.၂ ၁၇.၃ ၁၇.၄ Yamada 2019
↑ 嬉野に忍者３人いた！　江戸初期－幕末　市が委託調査氏名も特定။ 2018-08-20 တွင် ပြန်စစ်ပြီး။
↑ Japan university awards first-ever ninja studies degree။ AFP, Yahoo! News (26 June 2020)။ 26 June 2020 တွင် ပြန်စစ်ပြီး။
↑ Japan university to set up ninja research facilities။ Telangana Today (11 May 2017)။ 26 June 2020 တွင် ပြန်စစ်ပြီး။
↑ Tatsuya 1991
↑ Kawaguchi 2008
↑ Nihon Hakugaku Kurabu 2006
↑ Nihon Hakugaku Kurabu 2004; Turnbull 2003
↑ Fiévé & Waley 2003
↑ Turnbull၊ Stephen (2012)။ Ninja AD 1460–1650။ Oxford: Osprey Publishing။ p. 9။ ISBN 9781782002567။
↑ ၂၇.၀ ၂၇.၁ Turnbull 2003; Turnbull uses the name Buke Meimokushō, an alternate reading for the same title. The Buke Myōmokushō cited here isamuch more common reading.
↑ Howell 1999
↑ ၂၉.၀ ၂၉.၁ ၂၉.၂ Mol 2003, p. 176
↑ ၃၀.၀ ၃၀.၁ Draeger & Smith 1981, p. 127
↑ ၃၁.၀ ၃၁.၁ ၃၁.၂ Ratti & Westbrook 1991, p. 329
↑ ၃၂.၀ ၃၂.၁ Mol 2003, p. 124
↑ နင်ဂျာတိုး ဟု ခေါ်သော ဓားဖြောင့်မှာ သမိုင်းတွင် မရှိပဲ ယနေ့ခေတ် တီထွင်မှုသာလျှင် ဖြစ်နိုင်သည်။
↑ ၅၃.၀ ၅၃.၁ Waterhouse 1996, pp. 24–27
↑ ၅၇.၀ ၅၇.၁ 嬉野忍者調査結果　弁慶夢想 （べんけいむそう） 【武術家・山伏 / 江戸時代初期】။ 2018-08-20 တွင် ပြန်စစ်ပြီး။
↑ Bo Min Yaung (1990)။ アウンサン将軍と三十人の志士 : ビルマ独立義勇軍と日本။ 中央公論社။ ISBN 978-4121009807။
↑ John Man (2012)။ Ninja: 1,000 Years of the Shadow Warrior။ Bantam Press။ ISBN 978-4121009807။
↑ 西原征夫 『全記録ハルビン特務機関―関東軍情報部の軌跡』 毎日新聞社、1980年
↑ 「忍者文化研究プロジェクト レクチャー・デモンストレーション2019（ミャンマー）と題した忍者講座を開催しました။ Mie University (2019-10-28)။ 2019-11-16 တွင် ပြန်စစ်ပြီး။
↑ 大膳神社 Sado Tourist Bureau
↑ 透波 Kotobank
↑ 熊若 忍者名鑑
"https://my.wikipedia.org/w/index.php?title=နင်ဂျာ&oldid=637525" မှ ရယူရန်
၁၃ ဇန်နဝါရီ ၂၀၂၁၊ ၀၈:၁၈ အချိန်တွင် နောက်ဆုံး တည်းဖြတ်ခဲ့သည်။
ဤစာမျက်နှာကို ၁၃ ဇန်နဝါရီ ၂၀၂၁၊ ၀၈:၁၈ အချိန်တွင် နောက်ဆုံး ပြင်ဆင်ခဲ့သည်။